ब्लग - Ratopati
केपी ओलीको सरकारलाई केही यक्ष प्रश्नहरु
एउटा विषम परिस्थितिका बीचमा कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । एकातिर भर्खरै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो भने अर्कोतिर मधेस आन्दोलनले जनजीवन ठप्प थियो । धेरै मधेसीलाई जातीय विखण्डकारीको आरोपमा गोलीले भुटिएको थियो भने मधेसवादी कार्यकर्ताहरुले मधेसमा जताततै पार्टी कार्यालयदेखि एम्बुलेन्ससम्म जलाइरहेका थिए । यस..
‘हाकिम साप हाम्रो पनि गुनासो सुनिदिनूस्’
विकास सबैलाई चाहिन्छ । नेता, पत्रकार, कर्मचारी, शासक, प्रशासक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, सं..
राजनीति त गर्ने तर कसरी ?
युवाले देश बनाउँछन् । युवा परिवर्तनका सम्वाहक हुन् । बूढाखाडाले छाडे देशमा कायाकल्प हुन्थ्..
मन्त्री रमेश लेखकलाई कर्णालीपारिको पत्र
माननीय मन्त्रीज्यू यहाँले मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको धेरै भएको छैन । त्यसकारण तपाईंंलाई कार्ण..
सडक दुर्घटनाको भयावह स्थिति कहिलेसम्म ?
गत साता मैले हवाई दुर्घटनालाई लक्षित गरी नेपालको आकाश असुरक्षित रहेको बारे लेखेको थिएँ, यो..
तपाईं कसैको ‘यस म्यान’ बन्न हुँदैन
सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू, कहिल्यै सोचेको थिइनँ– प्रधानमन्त्रीलाई चिट्ठी लेख्छु होला भनेर । देश नांगो, भुतुंगो अनि टुहुरो हुन लागेको अवस्थामा यी कलिला आँखाले देख्न सकेनन् । त्यसैले बाध्य भएर हजुरलाई यो चिट्ठी लेख्दै छु ।म, न माओवादी हुँ, न एमाले, न त कांग्र्रेस नै । अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा मैले कुनै पार्टीको झन्डा फहराएर ..
झुक्याएर मितद्वारा भीमदत्त पन्तको हत्या !
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका सेनानीसमेत रहेका सहिद भीमदत्त पन्तले भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा होमिएका कारण १८ महिना कठोर कारावास सजायसमेत भोगेका थिए । बदलामा स्वतन्त्र भारतका शासकले राजा, कांग्रेस, राणा र भारतबीच भएको दिल्ली सम्झौता र नेपालमाथि भारतीय फौजको हस्तक्षेपविरूद्ध बोलेका कारण तत्कालीन कांगे्रस सरकारसँग मिली संयुक्त रु..
प्रधानमन्त्रीलाई सहिद परिवारको पत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ खाडीमा पसिना बगाउँदै गरेको सहिदको भाइका तर्फबाट लाल सलाम । सर्वप्रथम कामरेड यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा यो चिठीमार्फत भए पनि हार्दिक बधाई दिन चाहान्छु । केही दिन अगाडि तपाईंलाई चिठ्ठी कोर्दै थिएँ तर किनकिन विगतका घाउले फेरि पोल्न थाल्यो । कलमका सुइहरु घुमाउनै सकिन । अनि कलम बन्द गरेर जनयुद..
जोया, तिम्रा दुई छोरा बाबुजस्तै नबनून्
प्रिय जोया हुन त म साइनोमा तिम्रो कोही पर्दिनँ । तिमी र ममा देशको भिन्नता छ । भाषाको भिन्नता छ । लवाइ–खवाइको भिन्नता छ । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हामीमा एउटा महान् साइनो छ, त्यो हो मानवीयता र नारीको साइनो । मजस्तै तिमी पनि नारी अनि कसैकी आमा, कसैकी छोरी, कसैकी चेली हौ । सबैभन्दा […]
धर्तीको स्वर्ग रारा
मुगुको रारा गाउँ विकास समितिमा रहेको अनुपम प्राकृतिक सम्पदा राराताल समुद्र सतहबाट २,९९० मिटर उचाइमा रहेको छ । पाँच किलोमिटर लम्बाइ, तीन किलोमिटर चौडाइ र १६७ मिटर गहिराइ रहेको रारा क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल हो । रारा १०.८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । रारावरिपरि घुम्न तथा तालको सौन्दर्य अवलोकन गर्नका ला..
परदेशमा देशप्रतिको माया
विदेशमा नेपालीहरूलाई हप्ताभरी काम गरेपछि आइतबार बिदा हुने गर्दछ । ठूलो सपना बोकेर आफ्नो जन्मभूमि चटक्क छाड्दै आफ्ना परिवारजन, मित्र र नातागोताबाट टाढा हँुदै विदेश आइपुगेका ह्ुन्छन् । सुन्दर भविष्यको सपना साकार पार्न विभिन्न बाधा अड्चन छिचोल्दै विदेशिएका हुन्छन् । यो उनीहरूको कुनै रहर नभई बाध्यता हो । घर, परिवार र देश यसैबाट चलेक..
जनगणना २०६८ अनुसार, कुल जनसंख्याको ४४.४२ प्रतिशत १८ वर्षमुनिका झन्डै १ करोड १० लाख बालबालिका रहेका छन् । जसमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् । उनीहरु बालश्रमिकका रुपमा श्रमका विभिन्न स्थान र क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । त्यस्ता बालश्रमिक २६ लाखबाट घटेर १७ लाखमा झरेका छन् । नेपालमा १६ वर्ष उमेरसम्मलाई बालबालिक..
BLOG : फेरि अर्काे ‘पागल’ महावीरको महाअभियान
महावीर पुनसँगका ५ घण्टा देशमा फेरि एउटा पागलको आवाज गुन्जिँदै गएको छ । त्यो पागल जसले नेपालमा आविष्कार केन्द्र खोलेर नयाँ वैज्ञानिक र नयाँ नयाँ विज्ञान प्रविधिको खोजी गर्दै देशलाई उन्नति पथमा लम्काउन चाहन्छ । देशमा राम्रो र फरक काम गर्न खोज्नेलाई प्रायः पागल भनिएको छ । डा. केसीजस्तै अर्काे पागल महावीर पुन । आजकाल […]
युवा उद्यमशीलता : सम्भवना र चुनौती
विषय प्रवेश युवा शक्ति राष्ट्रको आशा र भरोसाको केन्द्र हो । युवा शक्तिविना विश्वका कुनै पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण र क्रान्ति सफल भएका छैनन् । त्यसैले युवा शक्ति समाज परिवतर्नका संवाहक शक्ति हुन् । युवामा निहित साहस, सिर्जनशीलता र उच्च आत्मविश्वासका कारण यो शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोतसमेत मा..
ब्लग : अफताल त कथ्थो गन्हाउने रच बाइ
उसो त ‘कहिल्यै अस्पताल जान नपरोस्’ भनेर कामना गर्ने ममात्रै एक्लो होइन हुँला । जिन्दगीका धेरै बाध्यतामध्ये अस्पताल जानैपर्ने बाध्यतासँग मलाई सख्त घृणा छ, त्यति घृणा मेरा दुस्मनलाई पनि गर्दिनँ म । केही दिनअघिको कुरा हो । श्रीमतीको पेटमा असमान्य समस्या देखिएपछि जाजरकोट अस्पतालको पुर्जी काट्ने लाइनमा पालो पख्र्यौं । साथमा अढाई वर्ष..
BLOG : समयको अवमूल्यन
हामी कस्तो समाजमा हुर्के, बढेका छौँ, त्यो बुझ्न हामीले समयलाई कत्तिको महत्व दिन्छौँ, त्यो बुझ्न जरूरत छ । सरकारी कार्यालय होस् वा कुनै सभा–समारोह या अन्य कुनै कार्यक्रम । यदि उल्लिखित समयमै ढिलासुस्ती नगरी हामी त्यहाँ पुग्यौँ भने आफ्नो पदीय मर्यादा र सम्मान नै धरापमा पो पर्ने हो कि जस्तो कल्पना गर्छौं । कुनै पद […]
कोरिया र फेसबुकले रित्तिएको जिन्दगी
राजु सुवेदी कास्की जिल्ला ढिकुरपोखरी गाविस वडा नं.५ का स्थानिय बासिन्दा हुन् । राजुका तीन दाजुभाई थिए । राजु सबै भन्दा ठूला छोरा थिए, १० वर्षका । पेशाले राजुका पिता माध्यमिक तहका नेपाली शिक्षक हुन् र फुर्सदको समयमा गाउँघरका पुजा पाठ उनको वैकल्पिक आम्दानीको पेशा थियो । गाउँघरमा सुवेदी परिवारलाई शिक्षक र गुरुको परिवारको रुपमा [&he..
गाऊँ रोज्दा निमोनियाले मृत्युवरण गर्ने एउटा शिक्षक साथिको नाममा
प्रिय दीपक, यस्तो कुन शब्द खिपुँ, जसले मेरो भावना र तिम्रो समर्पणको सही व्याख्या गर्न सकोस्? एक मनले लेखेर के पीडा पोखौँ जस्तो पनि लागेको छ । तर हाम्रो पुस्ताका युवाहरूले सुन्नै पर्ने तिम्रो आदर्श, हिम्मत, अन्तिम समयसम्मको अठोट र छोटै भएपनि तिमिले बाँचेको स्वाभिमानपूर्ण जीवनको कहानी नभनी पनि कसरी बसुँ? हो, साथि तिमीले यो [&helli..
BLOG : उनलाई भुल्न अन्तै डेरा
अलि उता सर्नुस् न । म हल्का उता सरेपछि उनी मेरो छेउमा आएर अटिनअटी बसिन् । बिदाको दिनबाहेक प्रायःजसो उनको र मेरो भेट यसरी नै माइक्रोबसको भीडमा हुन्थ्यो । म थानकोटदेखि चढ्थँे भने उनी कलंकीबाट । र, सँगै रत्नपार्कमा उत्रन्थ्यौँ । फर्कंदा भने एक÷दुईपटक बाहेक खासै भेट हुन्नथ्यो । यसरी निरन्तरको भेटमा उनी मलाई परिचितझैँ […]
ब्लग : वृद्धाश्रमकी आमा
एक साँझ टहलिँदाटहलिँदै पशुपतिमात्र के पुगेको थिएँ, एक वृद्धा आमाले मलाई एकटकले हेरिरहेको देखेँ । मेरै हजुरआमा सरहकी ती वृद्धा देख्दा अझ बढी श्रद्धाभाव जागेर आयो । नजिकिन मन लाग्यो, सामिप्यमा जान मन लाग्यो । टोलाएका नयनका भाका बुझ्न मन लाग्यो । अनि उनका तीता–मीठा इतिहास जान्न मन लाग्यो । तर, उनीसामु जाऊँ कसरी ? […]
पत्रकारको योग्यता परीक्षण !
पत्रकारितालाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउनकै लागि पत्रकारको योग्यताको परीक्षण आवश्यक रहेको प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले दोहोर्याइरहँदा नेपालमा पत्रकारिताको दुरूपयोग र यस क्षेत्रका विकृति सतहमै छताछुल्ल भएको जोकोहीले ठम्याउन सक्छ । पत्रकारिताको मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तको कुरै छाडौँ, पत्रकारितासम्बन्धी सामान्य ज्ञानस..
ब्लग : मैले चिनेको प्रकाश दाहाल
जब कुनै व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासमा सकारात्मक फड्को हान्ने परिस्थिति आउँछ, तब प्रायः नेपालीहरु बाल्मिकीलाई दृष्टान्तको रुपमा अघि सार्दछन् । रत्नाकर डाँकुबाट बाल्मिकी बनेको नेपाली किंवदन्तीले भन्छ, ‘कुनै पनि मानिसले आत्मसमीक्षा गरेर इतिहासका गल्तीहरु सच्चाउन सक्छ, जीवनलाई सत्कर्म र सफलताको मार्गमा समर्पित गर्न सक्छ ।’ विश्वमा यस..
धार्मिक आस्था, हिन्दु राष्ट्र र नेपाल
विश्वको एक मात्र हिन्दुहरुको बाहुल्य रहेको राष्ट्र नेपाल हो । यहाँ करिब ८० प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बीको बासोवास छ । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलताभन्दा पहिला हिन्दुहरुको भावनालाई कदर गरिँदै वर्षौंदेखि संवैधानिक रुपमा नै नेपाल हिन्दु राष्ट्र थियो । तर जनयुद्धपछि सार्वजनिक राजनीतिमा नेकपा माओवादीको आगमन भएपछि गठित संविधान सभाको वैठकल..
ब्लग : प्रचण्ड सरकारले पूरा गर्नुपर्ने १० कार्यभार
पंक्तिकार नेपालको राजनीति र पार्टीप्रति पक्ष लिने र दिने मान्छे होइन । तर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियालेर निष्पक्ष रुपमा हेर्दा केही फुटेको घैँटो टाल्दा कसरी जोडिन्छ र पानी थाप्न, बोक्न र पिउन सहज र भरपर्दाे हुन्थ्यो होला भन्ने विकल्पबारे लेख्ने जमर्काे गर्दै छु । सबैको कमजोरी र सबैको राम्रो पक्ष (१) केपी शर्मा ओली सरकारमा..
BLOG :प्रचण्डसँग जनताका अपेक्षा
सत्ता र शक्तिवरिपरि घुमिरहने नेपाली राजनीतिमा सरकारका विभिन्न संस्करणका केन्द्र बन्ने र भत्किनेक्रम लामो समयदेखि चलिरहेको छ । सरकारको आगमन र बहिर्गमनमा जनताको नयाँ सरकारप्रतिको अपेक्षा र पुरानोसँगको मोह खासै हुँदैन । कारण सरकार निर्माण र बिघटनको अभ्यस्तताले गर्दा जनतामा खासै नवीनता सञ्चार गर्दैन । नेपालका प्रायः ठूला राजनीतिक दल..
BLOG : शान्ति स्थापनामा युवाको भूमिका
नेपालमा अहिले राजनीतिक अस्थिरताले आक्रान्त भइरहेको छ । धेरै युवा आºनो कुनै भूमिका नै नभए जसरी चुपचाप बसिरहेका छन् । युवाहरु जाग्नुपर्छ अनि मात्र समाजमा परिवर्तन आउन सक्छ । समस्यालाई ठूलो रुपमा हेरेर मात्र हुँदैन । युवाहरुले स्थानीयस्तरबाटै शान्ति प्रकृयाका लागि आफ्नो अहम भूमिका खेल्नुपर्छ । आफूले गर्न सक्ने कामका लागि आºनै आधार ..
नेविसंघ महाधिवेशन : निर्वाचननै विकल्प
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेर स्वर्णिम इतिहास बनाउन सफल नेपाल विद्यार्थी संघ बर्तमान समयमा इतिहासकै चरम संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । पञ्चायतकालमा राजनितिक सुचना र राजनितीक विचार जनस्तर सम्म प्रवाह गर्ने र प्रजातन्त्र पक्षीय राजनितिक आन्दोलनको दरिलो संगठक निर्माण गर्ने उद्धेश्यले निर्माण भएको न..
अर्थमन्त्रीलाई पाठक पत्र : औसत नेपालीले गाडी किन्ने नीति चाहियो
सम्मनीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री ज्यू हामी लगभग ५० लाख नेपाली विदेशमा श्रम मजदुरी गरिरहेका छौँ । हामीले कमाएर पठाएको रेमिटेन्सबाट नेपाल सरकारलाई धेरै फाइन्सियल सहयोग भएको छ । त्यसकारण हामीलाई पनि नेपाल सरकारबाट केही न केही फाइदा हुनुपर्यो । हाम्रो माग धेरै फरक र चुनौतिपूर्ण छैन । हामी प्रवासी नेपालीहरु लगभग ३० प्रतिशतले राम्रो च..